Baolina kitra :: Hatao any Zimbaboe ny Cosafa Cup • AoRaha
Baolina kitra Hatao any Zimbaboe ny Cosafa Cup
Haja Lucas Rakotondrazaka
Tapaka, tamin’ny herinandro lasa teo, fa hotanterahina any Zimbaboe ny andiany fahaenina amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Cosafa na ny Cosafa Cup, eo amin’ny taranja baolina kitra. Ity no fifaninanan’ireo firenena aty amin’ny faritra atsimon’i Afrika, ka anisan’izany i Madagasikara.
“Nekena ny fangatahan’i Zimbaboe hampiantrano an’io fifaninanana io. Andrasana kosa ny valin-tenin’ireo mpitondra fanjakana any an-toerana hahafahana mamarana ny fanda­minana rehetra”, hoy ny filazan’ny avy ao amin’ny fitantanan’ny Cosafa.
Efa nandray ny fiadiana ny amboaran’ny Cosafa ity firenena ity, tamin’ny taona 2009. Izy ihany koa no nibata ny amboara tamin’izany fotoana izany, raha nandavo an’i Zambia teo amin’ny lalao famaranana tao Harare. Mbola ny Zimbaboeana ihany no nandresy tamin’ny Cosafa Cup tamin’ny taona lasa teo, rehefa nandresy indray ny Zambiana tatsy Afrika Atsimo. Miandrandra fatratra ny mbola handrombaka indray ny amboara amin’ity taona 2019 ity izy ireo.
“Sady fanomanantena ho an’ireo firenena avy aty amin’ny faritra Atsimo ihany koa io fifaninanana io, mialoha ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika na ny CAN”, hoy hatrany ireo mpitantana ao amin’ny Cosafa. Isan’izany i Madagasikara, izay nandray anjara tamin’ny Cosafa Cup hatrany tao anatin’ny taona maro izay, ary handray anjara amin’ny CAN ihany koa amin’ny volana jona, any Ejipta. Tonga teo amin’ny lalao manasa-dalana ny Barea tamin’ny Cosafa Cup 2018, ary niafara teo amin’ny laharana fahaefatra avy eo.
Baskety Analamanga :: Hisy fifaninanana roa vaovao
Rugby-MAKIS-U20 :: Hisy fifantenana faobe ho an’ireo tanora teraka ny taona 1999-2000-2001